အာရှတစ်ဝှမ်း ဟုန်းဟုန်းတောက်နာမည်ကြီးနေတဲ့ အိချောပိုရဲ့ သင်္ကြန်ဓာတ်ပုံများ – Askstyle
အာရှတစ်ဝှမ်း ဟုန်းဟုန်းတောက်နာမည်ကြီးနေတဲ့ အိချောပိုရဲ့ သင်္ကြန်ဓာတ်ပုံများ
သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး အိချောပိုဟာဆိုရင် သရုပ်ဆောင်တဲ့ နေရာမှာ ပြောစရာမလိုလောက်အောင် သရုပ်ဆောင်ပြသပေးနိုင်ခဲ့ပြီး အပိုအလိုမရှိတဲ့ သရုပ်ဆောင်ကွက်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရင်ထဲရောက်အောင် ချပြပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုများစွာကို ရရှိထားခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အများရဲ့ ချစ်ခင်မှုများစွာကို ရရှိထားခဲ့ရတဲ့ သူမကတော့ အချိုးကျလှပတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ အပြုံးချိုပြီး အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာထားလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရှိခဲ့ရတာကြောင့် လူအများရဲ့အလယ်မှာ တင့်တယ်ပြီး အလှကြီးလှပနေခဲ့ရတဲ့ သူလေးတစ်ယောက်ပါ။
အများရဲ့ အလယ်မှာတင့်တယ်ပြီး လှပနေဆဲဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး အိချောပိုကတော့ လှပတဲ့ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ လိုက်ဖက်ညီလွန်းလှတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သင်္ကြန်ဖက်ရှင်လေးကြောင့် အာရှတစ်ဝှမ်းမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် နာမည်ကြီးနေခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိချောပိုရဲ့ သင်္ကြန်ဖက်ရှင်လေးတွေကလည်း ပုရိသတွေ တကယ့်ကို စွဲမက်စေနိုင်လောက်တဲ့ ဖက်ရှင်ဆန်းဆန်းလေး ဖြစ်ခဲ့ရတာပာ။
Rung Suphaphorn KuprasitRung Suphaphorn Kuprasit ရဲ့ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ အိချောပိုကတော့ အာရှတစ်ဝှမ်းမှ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေကိုပါ ရရှိထားခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိုးကျနလှပတဲ့ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ လိုက်ဖက်ညီလွန်းလှတဲ့ အဝတ်အစားကြောင့် အာရှတစ်ဝှမ်းမှာနာမည်ကြီးပြီး ပုရိသတွေအသည်းစွဲခဲ့ရတဲ့ အိချောပိုရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဆက်လက်ပြီး ကြည့်ရှုအားပေး သွားကြပါဦးနော်။
လှပအချိုးကျလွန်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကြောင့် ပြည်ပကလူတွေပါမကျန် စိတ်ဝင်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ အိချောပိုကတော့ ” The Famous Myanmar girl. How did she make his body so good? This is calledagood body. Someone went to Myanmar and took it. ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့ ကိုယ်လုံးအလှကို တင်စားခြင်းခံလိုက်ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အာရှတစ်လွှားမှာ ၀က်ဝက်ကွဲအောင် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အိချောပိုဟာ အပြင်မှာလည်း တကယ်ကိုပဲ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေခဲ့တာကြောင့် သံသယတောင် ဖြစ်စရာမလိုပါဘူးနော်။ သင်ကော ဒီလို စွဲမက်ဖို့ကောင်းတဲ့ အိချောပိုရဲ့ ပုံတွေကို မြင်အပြီးမှာ အသက်ရှု မှားသွားခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လား..??
လှပတဲ့ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ လိုက်ဖက်ညီအောင် ဝတ်စားထားတဲ့ သင်္ကြန်ဖက်ရှင်လေးကြောင့် အာရှတစ်ဝှမ်းမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်နေတဲ့ အိချောပိုရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ရင်း အရမ်းကို လေးစားအားကျမိတယ်ဆိုရင် Share ပြီး အားပေးသွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့ဦးနော် မိုမိုလေး ပရိသတ်ကြီးရေ။ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ပေးရင်း ပရိသတ်တွေကို ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးနေဆဲဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး အိချောပိုကို ဆက်လက်ပြီး ချစ်ပေးအားပေးကြပါဦးနော်။ ကြည့်ရှုအားပေးကြပါသော ချစ်ပရိသတ်များအပေါင်း မိုမိုလေးမှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
Ref : Rung Suphaphorn Kuprasit’s Facebook
အနုပညာပျိုးခင်း ရဲ့ စင်တင်မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ အိချောပိုကတော့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေနဲ့အတူ ပရိသတ်ရင်ထဲ အရောက်လှမ်းလာနိုင်ခဲ့သူပါ။ လက်ရှိမှာလည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို ရိုက်ကူးနေရတဲ့ အောင်မြင်တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်နေပါတယ်။ မင်းသမီးလေး အိချောပိုဟာ သရုပ်ဆောင်ပညာရပ်မှာလည်း တော်သလို သူမရဲ့ တောင့်တင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှက ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားစရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်အလှကိုပေါ်လွင်စေတဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေကို အမြဲလိုလို ဝတ်ဆင်လေ့ရှိပြီး မြန်မာအင်္ကျီလေးတွေကိုလည်း နှစ်သက်မြတ်နိုးသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ မကြာမီအချိန်ကာလက ကျင်းပခဲ့တဲ့ နှစ်သစ်ကူး အတာသင်္ကြန်ပွဲမှာလည်း အိချောပိုတစ်ယောက် သူမရဲ့ အမိုက်စားကောက်ကြောင်းတွေကို ပေါ်လွင်စေတဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေကို ဖျော်ဖြေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။
ထိုဖျော်ဖြေပွဲမှာ ဝတ်စားထားတဲ့ ဝတ်ဆင်မှုနဲ့အတူ သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှပမှုဟာ ပရိသတ်တွေကြား ချီးကျူးဖွယ်ရာတစ်ခုဖြစ်လာပြီး သူမပုံတွေကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာလည်း ကြိုက်နှစ်သက်လို့ ရှယ်လုပ်သူတွေ များပြားခဲ့ပါတယ်။ အိချောပိုရဲ့ ဘော်ဒီကောက်ကြောင်းအလှဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပရိသတ်တွေတင်မကဘဲ နိုင်ငံရပ်ခြားက ပရိသတ်တွေထိပါ ရောက်ရှိသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ GAHD ဆိုတဲ့ ပေ့ခ်ျတစ်ခုကနေပြီး အိချောပိုရဲ့နှစ်သစ်ကူးဖျော်ဖြေမှုက ပုံရိပ်တွေကို တင်လိုက်တဲ့နောက်မှာတော့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက ပရိသတ်တွေက သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းလှပမှုကို စိတ်ဝင်တစားဖြစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေနဲ့ အားကျသူတွေ များစွာကို မှတ်ချက်မှာတွေ့ခဲ့ရပြီး မျှဝေသူ ၃၃၀၀၀ နီးပါးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အိချောပိုတစ်ယောက်ရဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားအထိပါ အောင်မြင်မှုရရှိနေတဲ့ ဘော်ဒီကောက်ကြောင်းအလှတွေကို ပရိသတ်ကြီးအတွက် ထပ်မံဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။